Vaovao - Manome tari-dalana vaovao amin'ny fitaterana an-dalamby eran-tany i China Railway Express
China Railway Express dia manome torolàlana vaovao amin'ny fitaterana an-dalamby eran-tany
China Railway Express dia manome torolàlana vaovao ho an'ny fitaterana an-dalamby eran-tany; China Railway Express, fiaran-dalamby mpitatitra entana voalohany izay hiainga avy any Chine ka hiakatra any Eropa amin'ny alàlan'ny fampiasana Marmaray, dia noraisina an-tsehatra tao amin'ny Ankara Station niaraka tamin'ny lanonana natao ny 06 Novambra 2019. Sina sy Eropa, izay noforonina mifanaraka amin'ny kavina volamena Tiorka "One Tetikasa Way Belt "ny fiaran-dalamby fitaterana voalohany tonga tao Ankara.
China Railway Express, fiaran-dalamby mpitatitra entana voalohany izay hiainga avy any Shina ary handeha ho any Eropa amin'ny alàlan'ny fampiasana Marmaray, dia noraisina an-tsehatra tao amin'ny Ankara Station niaraka tamin'ny lanonana natao ny 06 Novambra 2019.
Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan, ny minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan, ny Tale jeneralin'ny Logistics sy ny terminal an'ny lalamby Georgia Lasha Akhalbedashvili, filohan'ny lalamby nasionalin'ny Kazakhstan Sauat Mynbaev, minisitry ny toekarena Azerbaijan Niyazi Seferov, minisitry ny fitaterana lefitra ny Komitin'ny Antokom-paritra Shaanxi Adil Heping Hu Karaismailoğlu, Tale jeneraly TCDD Ali İhsan Uygun, Tale jeneraly mpitantana ny fitaterana Kamuran Yazıcı, birao, lalamby ary olom-pirenena mifandray amin'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa no nanatrika.
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa tamin'ny lahateny nataony nandritra ny lanonana Mehmet Cahit Turhan, kontinanta telo dia nanondro ny maha-zava-dehibe ny geostrategika sy ara-jeopolitika an'i Torkia amin'ny fampifandraisana.
Turhan, Azia miaraka amin'ny toerana ara-jeografika ny fitohizan'ny tantara sy ny kolontsaina, Eoropa, Balkans, Caucasus, Moyen Orient, Mediterane ary ny Ranomasina Mainty dia voalaza fa manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny faritra resahina ao Tiorkia miaraka amin'ny firenena.
Tombony azo amin'ny fitaterana an-dalamby
Izy io dia karazana fitaterana tontolo iainana sy sariaka.
Izy io dia azo antoka kokoa noho ny karazana fitaterana hafa.
Manamaivana ny vesatry ny fifamoivoizana ny arabe.
Amin'ny ankapobeny, tsy toy ny fomba fitaterana hafa, misy fiantohana maharitra maharitra.
Na dia misy fameperana fitaterana aza ny zotra an-tanety amin'ny tetezamita iraisampirenena dia tombony ho an'ny tetezamita izany satria karazan'entana fitaterana an-tanindrazana no tiany.
Na dia somary be lavitra noho ny làlambe aza ny fotoana fitaterana dia raikitra ny fotoana fitsangantsanganana.
Io no karazana fitaterana mety indrindra ara-batana sy lafo vidy ho an'ny taonina mavesatra sy enta-mavesatra be.
Ny fitaterana an-dalamby dia maodely fitaterana malaza indrindra amin'ny resaka fahamendrehany, fiankinan-doha amin'ny olona ary noho izany ny loza mety hitranga, mampihena ny vidin'ny fifaninanana, tombony amin'ny làlana ary mamorona vahaolana ara-tontolo iainana.
Satria mety amin'ny fitaterana an-tsokosoko izy io dia manana tombony amin'ny fampihenana ny hakitroky (oh: ny vesatry ny fifamoivoizana an-dàlana) ateraky ny karazana fitaterana hafa.
Io ihany no fomba fitaterana izay tsy voakasiky ny toetr'andro ratsy.
Fotoana fandefasana: Jul-11-2020
Teny lakile B, Teny lakile A, Vokatra rehetra